Tinye Nkọwa Na Vidio Youtube Gị | Martech Zone
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebugo vidiyo na vidiyo Youtube ma ejikwala uru optimizing ha video ma ọ bụ na-agbakwunye nkọwa. Na nkọwa ị nwere ike ikpokọta ederede, njikọ, na ebe ikpo ọkụ na vidiyo gị. Nkọwapụta nyere gị ohere itinye ozi, mmekọrịta na itinye aka. Maka azụmaahịa, nke a pụtara na ị nwere ike kpuchie oku na-arụ ọrụ ozugbo na vidiyo - na-agbakwunye njikọ njikọta na ngosi, nbudata ma ọ bụ ndebanye aha.
Nkọwa anaghị egosipụta na Youtube, a na-egosipụta ha na nke ọ bụla n'ime egwuregwu ndị agbakwunyere. Ma ọ dịkarịa ala, ị ga-agbakwunye nkọwa iji rịọ ndị na-ekiri ihe ịdenye aha na Youtube!
E nwere ụdị nkọwa dị iche iche ise ịhọrọ site na:
Okwu afụ mepụta okwu mmapụta na iji ederede.
Akara - gosipụta ebe dị na vidiyo; mgbe onye ọrụ na-emegharị òké n'akụkụ ndị a ederede ị na-abanye ga-apụta.
Note - mepụta igbe ndị nwere mmapụta nwere ederede.
aha - mepụta ederede ederede ka aha vidiyo gị.
Label - mepụta akara iji kpọọ ma kpọọ otu akụkụ nke vidiyo gị.
Ihe edeturu, Okwu egosipụta na ntụpọ, enwere ike jikọta ya na "ọdịnaya" dịka vidiyo ndị ọzọ, otu vidiyo ahụ, ibe ọwa, listi ọkpụkpọ, nsonaazụ ọchụchọ. N'otu aka ahụ, ha nwekwara ike jikọọ na "oku na-eme ihe" dịka ịdenye aha, ide ozi ma bulite nzaghachi vidiyo. Lelee igbe "Njikọ" n'okpuru ntọala "Malite" na "Ọgwụgwụ". Nwere ike ịhọrọ ma ịchọrọ nkọwa ahụ iji jikọta vidiyo ọzọ, ọwa gị, ma ọ bụ na njikọ mpụga.
Maka ụfọdụ Atụmatụ dị elu na iji nkọwa Youtube - gaa na peeji nkwado ha na isiokwu ahụ. Iji n'ezie leverage Youtube, lelee Playbook Onye Okike ha mepụtara!
Tags: nkọwa youtubeaha njirimara youtubenkọwa njikọ youtubeederede YouTubeokwu youtube afụọkụ ọkụ youtubeyoutube aha
Mee 22, 2013 na 4: 30 AM
m chere na ọ bara ezigbo uru. Daalụ!